China pea peptide ụlọ ọrụ na-emepụta | Yasin
A obere molekul nọ n'ọrụ peptide nwetara site na iji biosynthesis enzyme mgbaze Usoro iji agwa na agwa protein dị ka akụrụngwa. Peptide pea na-edozigharị ihe niile amino acid mejupụtara agwa, nwere amino acid 8 dị mkpa na ahụ mmadụ enweghị ike ịkọpụta n'onwe ya, oke ha dịkwa nso na usoro FAO / WHO (Nri na Ọrụ Ugbo nke United Nations na World Tù Ahụ Ike). FDA na-ele peas ka ọ bụrụ ihe ọkụkụ kachasị dị ọcha ma ọ nweghị ego ịnyefe ego. Peptide pea nwere ezigbo ihe oriri na-edozi ahụ ma bụrụkwa ezigbo ọrụ nri dị mma.
Ntọala Ọkọlọtọ Ule dabere na
Zdị nhazi Ekike edo, dị nro, enweghị nri Q / HBJT 0004S-2018
Agba White ma ọ bụ ìhè odo ntụ ntụ
Detuo ma nu isi Nwere uto pụrụ iche na isi nke ngwaahịa a, enweghị isi pụrụ iche
Adịghị ọcha Enweghi oke ocha anya
fineness （g / ml） 100% site na sieve na oghere nke 0.250mm —-
Protein （% 6.25） ≥80.0 (Akọrọ ndabere) GB 5009.5
peptide ọdịnaya (%) ≥70.0 (Akọrọ ndabere) GB / T22492
Mmiri （%） ≤7.0 GB 5009.3
Ash （%） ≤7.0 GB 5009.4
pH uru —- —-
Nnukwu ọla （mg / kg） Pb） * .0.40 GB 5009.12
Hg） * 0.02 GB 5009.17
Cd） * .0.20 GB 5009.15
Kpamkpam Bacterias （CFU / g） CFU / g, n = 5, c = 2, m = 104, M = 5 × 105; GB 4789.2
Nje bacteria (Salmonella, Shigella, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus) * Na-adịghị mma GB 4789.4 、 GB 4789.10
Chart Chart Maka Production Peptide
A pụrụ iji àgwà ndị na-edozi ahụ dị na protein na-edozi ahụ mee ka ndị mmadụ nwee nkwarụ ụfọdụ, ma ọ bụ ndị na-achọ ime ka nri ha jupụta na nri. Peas bụ ezigbo ihe na-enye protein, carbohydrates, eriri nri, mineral, vitamin na phytochemicals. Dịka ọmụmaatụ, protein agwa nwere ike ịhazi oriri iron dịka ọ dị elu na igwe.
Enwere ike iji protein dị ka ihe nnọchi protein maka ndị na-enweghị ike iri isi mmalite ndị ọzọ n'ihi na anaghị esite na nri ndị na-emetụta ọrịa (ọka wit, ahụekere, àkwá, soy, azụ, azụ azụ, akụ osisi, na mmiri ara ehi). Enwere ike iji ya na ngwa nri ma ọ bụ ngwa nri ndị ọzọ iji dochie ihe ndị na-ahụkarị. A na-arụkwa ya ọrụ iji mepụta ngwaahịa nri na protein ndị ọzọ dị ka ngwaahịa anụ ndị ọzọ, na ngwaahịa ndị na-abụghị mmiri ara ehi. Ndị na-emepụta ihe ndị ọzọ gụnyere Ripple Foods, ndị na-emepụta mmiri ara ehi mmiri ara ehi mmiri ara ehi. Mkpụrụ protein agwa bụkwa anụ-ndị ọzọ.
A na-ejikwa protein pea dị ka ihe na-arụ ọrụ dị ọnụ ala na-arụpụta ihe oriri iji meziwanye uru na-edozi ahụ na ụdị nri ngwaahịa. Ha nwekwara ike ebuli viscosity, emulsification, gelation, kwụsie ike, ma ọ bụ njirimara na-ejikọ abụba nke nri. Dịka ọmụmaatụ, ikike nke protein agwa iji mepụta ụfụfụ kwụsiri ike bụ akụ dị mkpa na achịcha, nro, pịpịa elu, fudges, wdg.
Collagen Dị Ọcha
Otutu Collagen Peptides
Adịghị mma Collagen Peptides
Ngwakọta Peptides kacha mma